Somaliland oo billad siisay Duuliyihii diidey inuu Hargaysa duqeeyo xilli ay dad badani sharci darro halkaa ugu xiran yihiin | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somaliland oo billad siisay Duuliyihii diidey inuu Hargaysa duqeeyo xilli ay dad...
(Hargaysa) 21 Okt 2020 – Duuliye ka tirsanaa Ciidanka Cirka Somalia ayaa waxaa sharfay maamulka Somaliland oo sheegta inuu ka go’ay Somalia, kaddib markii uu diidey inuu duqeeyo magaalada Hargaysa.
Duuliye Axmed Maxamed Xassan (Axmed Dheere) ayaa waxaa abaalmarinta siiyey Wasiir Gudeedka maamulkaasi, Maxamed Kaahin oo xafladda ku qabtay isla Hargaysadii uu diidey inuu duqeeyo 32 sanadood kahor, isagoo duulinaya dayuurad Mig-17 ahayd oo uu si deg deg ah uga dejiyey xeebaha bataaxa ah ee Jabuuti.
Dheere ayaa Ciidanka Cirka ku biiray horraantii 1970-meeyadii isagoo noqday Gaashaanle, isagoo kasoo jeeda Gobolka Banaadir ee caasimadda dalka.
Bishii Maajo 1988-kii ayaa Dowladdii ciidamada ee xilligaa jirtey waxaa ay weerar ku qaaday jabhaddaha SNM, taasoo keentay inay dhibaato badani gaarto dadka rayidka ahaa ee halkaa ku noolaa oo la sheegay in loo weeraray si aan loo kala aaba yeelin.
Yeelkeede, Maamulka Somaliland oo 18-kii Maajo 1991-kii sheegay inuu ka go’ay Somalia inteeda kale ayaa dabaqa siyaasad uu ku bartilmaameedsanayo shacabka koonfurta iyo xitaa calanka Somalia iyadoo ay hadda Hargaysa si sharci darro ah ugu xiran yihiin milkiilaha hilinka Astaan iyo wiil dhallinyaro ah oo lagu haysto inuu cabey ”SHAAH BULUUG AH”, taasoo aan wax micne ah u samaynaynin qaddiyadda Somaliland ku sheeganayso inay cadaalad darro darteed uga go’ayso Somalia.
Waxaa sidoo kale xiran dad badan oo reer woqooyi ah oo lagu haysto ra’yigooda xorta ah.
Weli Duuliye Dheere lama waydiinin inuu raalli ka yahay inuu dalku kala go’o iyo in kale.
Previous articleTaiwan oo nin Chinese ah ku haysata dilka 4 qofood oo Soomaali ah (Maxkamad lasoo taagey & naxariis darrada ninka)
Next articleEthiopian Airlines oo ay duuliye ka noqotay gabadhii ugu horreeysey ee dalkaa u dhalatay